Ithebula sezinyawo, Coffee Table, Lounge Sofa - Yezhi
High-Quality okusha Design Modern Indwangu Ezokudla Chair
Isitolo esidayisa yonke impahla Comfort PU Umholi Ezokudla Chair
Isitolo esidayisa yonke impahla yemvelo Eco-friendly abahlukile Design Lo ...
Yezhi iyinkampani ekhiqizako, ngokuhlanganisa design, ukukhiqizwa nokuthengisa zibe munye core. Amakhasimende ayo bavela emhlabeni wonke, ikakhulukazi kuhlanganise Melika, e-Australia, eBrithani, e-Italy nase-Canada. Imboni yesimanje itholakala Mingzhu Industrial Park, Conghua wesifunda, Guangzhou ne Ukuhlanganisa 40.000 ㎡ , endaweni ukwakhiwa 80,000 ㎡ . Kukhona inani abasebenzi 300 ne ikhiqiza iziqhumane 360,000pcs. Ikhanda ihhovisi layo in the ephakathi ka Guangzhou.
I 25th China International Ifenisha Expo
Kuyini iwaranti yakho?
Lounge Sofa Chair, Dinning Chair, Dinning Ithebula Futhi nezitulo Setha, Dinning Igumbi nezitulo, Bar Stools Bar Chairs, Restaurant Chairs And Stools,